QR Code Generator - အခမဲ့ QR ကုဒ်များဖန်တီးပါ
QR ကုဒ် မီးစက်
dynamic QR Code ကို
အခမဲ့ QR ကုဒ်များဖန်တီးနည်း
ထိုသူအားစကင်ဖတ်ပြီးနောက်သင်ပြလိုသည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ URL၊ စာသား၊ အီးမေးလ်၊ ခေါ်ဆိုမှု၊ SMS၊ WIFI နှင့် Bitcoin တို့ပါဝင်သောကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ဒေတာကိုမီးစက်ပေးလယ်ပြင်သို့ရိုက်ထည့်ပါ။ ပုံနှိပ်ပြီးနောက်အချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲလိုပါက MetriQR၊ ပြောင်းလဲနေသော QR Code စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ QR Code generator နှင့်သင်သင်၏ QR Code ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အရောင်များနှင့်လိုဂိုကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျကိုလည်းပုံသဏ္izeာန်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
သင်၏ QR Code ကိုဖန်တီးပြီးပါကအလိုရှိသော resolution ကိုသတ်မှတ်ပြီး Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ QR ကုဒ်ကို .png format ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
QR Code ဆိုတာဘာလဲ။
Quick Response (QR) codes တွေဟာ standard barcodes ထက်အချက်အလက်တွေအများကြီးပါတဲ့ Two-dimensional barcode တွေဖြစ်တယ်။ ၄ င်းတို့ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်၌ Denso Wave QR Code ဒီဇိုင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်နောက်ခံရှိစတုရန်းဇယားကွက်တွင်အနက်ရောင်စတုရန်းများမှာရိုးရှင်းသည်။
QR Code ကိုမည်သို့စကင်ဖတ်ရမည်နည်း။
ဖုန်းအသစ်များတွင်သင်သည် QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားသောကင်မရာအက်ပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းသည် QR Code စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုမပံ့ပိုးပါကသင်သည်အက်ပ်စတိုးမှ QR Code စကင်နာကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်မရှိ။ QR Code ကိုသင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ scan ဖတ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ QR Code သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
သင်၏ QR ကုဒ်သည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကနောက်ခံနှင့် foreground အရောင်များအကြားလုံလောက်သောဆန့်ကျင်ဘက်ရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ရှေ့တန်းအရောင်သည်နောက်ခံအရောင်ထက် ပို၍ မှောင်မိုက်ရမည်ကိုမမေ့ပါနှင့်!
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ တည်ငြိမ်သော QR ကုဒ်များကိုသတ်မှတ်ထားပြီးဆိုလိုသည်မှာအချက်အလက်များသည် QR Code သို့တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုလျှောက်ထားရန်သင် QR Code အသစ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ပုံနှိပ်ပြီးနောက်အကြောင်းအရာကိုပြောင်းလဲလိုပါက Dynamic QR Codes ကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်။ Dynamic QR ကုဒ်များဖြင့်သင်သည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုပင်ခြေရာခံနိုင်သည်။ သင် Dynamic QR ကုဒ်များလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် MetriQR.
ဟုတ်ကဲ့! သင်လိုချင်သော static QR ကုဒ်များစွာကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးသူတို့သည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုသင်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။
မဟုတ်ပါ။ သင်၏ QR ကုဒ်များနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှသိုလှောင်ထားခြင်းမရှိပါ။ သင်၏ QR ကုဒ်များကိုပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ QR ကုဒ်အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများကိုပင်ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ခြေရာခံစောင့်ရှောက် QR ကုဒ်များ.
MetriQR သည်တက်ကြွသော QR Code စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားယာဉ်ကြောမောင်းနှင်ရန်နှင့်ပရိသတ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကူညီသည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ Dynamic QR ကုဒ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ QR Code မန်နေဂျာသည်သင်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်အရေးအကြီးဆုံးခြေရာခံအချက်အလက်များကိုပြသည်။
သင်၏ QR ကုဒ်များကိုသီးခြားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖိုင်တွဲများတွင်သိမ်းဆည်းထားပါ။
QR ကုဒ်များသည်နှစ်စဉ်တိုးတက်နေသည်။ သူတို့ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေမှာ QR Code ထည့်သွင်းဖို့စဉ်းစားနေကြတဲ့စျေးကွက်သမားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အလားအလာရှိတယ်။
MetriQR သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောစီမံကိန်းများကိုတစ်လလျှင် ၅ ဒေါ်လာသာပေးသည်။ ကတိက ၀ တ်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အချိန်ကိုမဆိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
သင်၏ QR ကုဒ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်စစ်ဆေးပါ။ MetriQR သည်သင်၏သုံးစွဲသူများမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသင့်အားအသိပေးသည်။
သင်၏ QR ကုဒ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
သင်၏ QR Code ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။ သင်၏ QR ကုဒ်များပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အရောင်များနှင့်သင်၏လိုဂိုကိုသုံးပါ။
၁၄ ရက်ကြာအကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့စမ်းသပ်မှုဖြင့်စတင်ပါ။ ခရက်ဒစ်ကဒ်မလိုအပ်ပါ။ တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ 😎